के पपायाले शरीरको तातो वृद्धि गर्छ? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
के पपायाले शरीर तातो वृद्धि गर्छ?
घर स्वास्थ्य कल्याण कल्याण oi- स्टाफ द्वारा अजंता सेन मे 6, २०१। मा
प्रकृतिले मानवलाई केही मूल्यवान प्राकृतिक उपहारले आशिष दिएको छ। यी उपहार मध्ये, एक सजिलैसँग दुनिया भर मा उपलब्ध छन् कि फलफूल र तरकारी को विस्तृत विविधता विचार गर्नुपर्छ।
यी फलफूल र तरकारीहरू मानिसहरूको दैनिक आहारको सबैभन्दा ठूलो अंश गठन गर्दछन्। धेरै जसो यी खाद्य वस्तुहरूको आफ्नै प्रकृति र विशेषताहरू हुन्छन्।
यद्यपि, तिनीहरू मध्ये धेरै खानेकुराको धनी स्रोतका लागि परिचित छन् जुन भिटामिन, प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेटहरू समावेश गर्दछ।
यसका साथै, यसले मानव शरीरलाई सबै प्रकारका खनिजहरू, साथै क्याल्शियम, म्याग्नीशियम, फलाम र अन्य धेरै आपूर्ति गर्दछ।
कसरी वरमहलक्ष्मी चाडको लागि सजाउने
यी फलफूल र तरकारीहरू मध्ये, पपीताले धेरै प्रमुख स्थान ओगटेको छ किनकि यो दुबै फल र तरकारीहरू खाइन्छ।
विशेषज्ञ डाएटियनहरूको रायमा पपीता धेरै फूडहरूको सब भन्दा धनी स्रोत हो। यस्तो अवस्थामा पपीयाले शरीरको तातो बढाउँछ कि भनेर सोच्न गाह्रो छ।
यदि तपाइँ वैज्ञानिक निष्कर्षहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तब तपाइँले थाहा पाउनु पर्दछ कि पपीता मानव शरीरको लागि अत्यन्त राम्रो छ, तर मानिसहरूले यसलाई कहिले उपभोग गर्नुपर्दैन।
शुद्ध रोटीको १ प्लेटमा क्यालोरी
वास्तवमा भन्ने हो भने, पपीताले शरीरलाई केही एन्टिआक्सीडन्टहरू आपूर्ति गर्दछ, र जब यो ठूलो मात्रामा खपत हुन्छ, यससँग टाढा हुन गाह्रो हुन्छ।
यसको परिणाम स्वरूप शरीरको तापक्रम निश्चित तहमा बढ्छ।
त्यस बाहेक, तपाईले पपाइले कसरी शरीरको ताप बढाउँछन् भनेर सन्तोषजनक प्रमाणहरू भेट्टाउनुहुने छैन। यसको सट्टामा तपाईले पपाया उपभोग गर्ने फाइदाहरूको भारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ। ती मध्येका केहि निम्न छन्, हेर्नुहोस्:
यो पपीता खाने सबैभन्दा लोकप्रिय फाइदा हो। यसले पापाइन, पाचन एंजाइम समावेश गर्दछ जुन पाचन प्रणालीमा उत्तम प्रभाव प्रदान गर्दछ। पपाईको लगातार उपभोगका साथ, मानिसहरूले दुर्लभ पेट विकारहरूको साथ उत्तम पाचन प्रणालीको मज्जा लिन सक्छन्।
स्थायी रूपमा घरमा अनुहारको कपाल कसरी हटाउने
पपायासँग केहि उत्कृष्ट पदार्थहरू छन् जुन संक्रमणहरूसँग लड्न र तिनीहरूलाई बेमा राख्छ। तिनीहरू आन्द्रा कीड़ा र सबै प्रकारका संक्रमण बोक्ने अन्य एजेन्टहरूसँग लड्दछन्। यसको परिणाम स्वरूप, संक्रमणले मानव शरीरमा आक्रमण गर्दैन र यसैले हामीलाई स्वस्थ र सुरक्षित रहन अनुमति दिन्छ।
भर्खरका अनुसन्धानहरूले पपायाको हानिकारक असरहरू शरीरको तापलाई असर गर्ने कुरालाई इन्कार गर्दछन्। यसको सट्टामा, यसले पपायाको प्रभावकारी औषधीय प्रयोग स्वीकार्छन्, किनकि यसले क्यान्सर निम्त्याउने कीटाणुहरूसँग लड्दछ। प्रभावहरू सबै प्रकारको क्यान्सरमा सकारात्मक छन्, विशेष गरी अग्नाशय र स्तन क्यान्सर। थप अनुसन्धानहरू आधार घटकको रूपमा पपीता प्रयोग गरेर क्यान्सरका लागि राम्रो औषधि फेला पार्न सुरू भइसकेका छन्।
सुझाव बिना मेकअप बिना सुन्दर देखिन्छ
पपीता को अद्वितीय विशेषताहरु यो सबै छाला हेरचाह उत्पादनहरु को लागी एक परिपक्व र प्राकृतिक घटक बनाउँदछ कि व्यक्तिहरु यो दिन उपयोग। वास्तवमा, पपीयासँग पुनरुत्थान गर्ने एजेन्टहरू छन् जसले छालाको पोषण गर्दछन् र यसलाई स्वस्थ र चमक दिन्छन्। एलोभीराको साथ जोडी, पपीता सबै प्रमुख छाला केयर उत्पादहरूको लागि एक धेरै साधारण घटक हो। निस्सन्देह, पपीता को अच्छाई आफ्नो छाला हेरचाह पथ को आश्चर्यको थप्न सक्छ।
विरोधी भड़काउने प्रभाव:
यो अझै अर्को लाभ हो जसको लागि प्रयोगकर्ताहरूले पपाया बढाउँदै गरेको शरीरको तापमानलाई वेवास्ता गर्दछन्। यसले पिम्पल्स, एक्ने र अन्य छाला eruptions मा तत्काल सुखदायक प्रभाव ल्याउँछ।
पपीता खाने को धेरै जसो फाइदा तपाईलाई सजिलै बिर्सन सक्छ कि पपीताले शरीरको तातोमा वृद्धि गर्छ। यी प्रभावहरू पपीता उपभोग पछि तुरून्त महसुस गर्न सकिन्छ। तपाईं सजीलै आफैंले भिन्नता महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
तेल छालाको लागि अनुहारबाट ट्यान कसरी हटाउने
कसरी गुलाबी ओठ प्राकृतिक रूप बाट छ
कसरी बच्चा बच्चा स्वाभाविक आहार को गर्भधारण गर्ने
कसरी निराशा बाट छुटकारा पाउन
माथिल्लो ओठ कपाल हटाउने घरेलु उपचार
विशाल कोठा अनुसार पूजा कोठा दिशा
रातमा हरियो चिया पिउँदा फाइदा